musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Cyprus Airways yatanga ndege nyowani kubva kuRoma kuenda kuLarnaca
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cyprus Kupwanya Nhau • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Cyprus Airways inozivisa kuvhurwa kwenzira nyowani kubva kuRome, Itari kuenda kuLarnaca, Kupro kutanga kubva zhizha 2020, nendege mbiri dzevhiki dzinozove chikamu chenetiweki yakaziviswa neCypriot carrier.
Ndege dzichange dzichishanda kutanga June 13, Chitatu chega chega neMugovera.
Roma ndiyo yechipiri nendege yeItaly umo Cyprus Airways ichashanda, mushure mekuziviswa kwekambani yekuwedzera kweVerona kune yayo inogara ichiwedzera network munaNovember apfuura.
Natalia Popova, Mutungamiriri Wekutengesa weCyprus Airways, akati: "Tine chivimbo chekuti kuwedzerwa kweRome kunetiweki yedu chichava chisarudzo chakakurumbira pakati pevanoenda kuCyprus uye zvichabatsira mukuwedzera kwevashanyi kubva kuItari kuenda kunzvimbo yatinoenda."
Charlie Airlines Ltd, kambani yakanyoreswa muCyprus, yakahwina iyo tendera muna Chikunguru 2016 yekodzero yekushandisa iyo Cyprus Airways brand kwenguva gumi. Ndege dzevasikana vekambani dzaive muna Chikumi 2017.
Cyprus Airways inoshandisa ndege kuEurope uye kuMiddle East. Ndege dzese dzeCyprus Airways dzinoshandiswa nendege dzeAirbus A319 dzinokwana zvigaro zana nemakumi mana nezvina mukirasi yehupfumi.
Muna Chikunguru 2018, Cyprus Airways yakabudirira kupasa iyo Operational Safety Audit (IOSA) yeInternational Air Transport Association (IATA), imwe yematanho epamusoro pasirese ekuchengetedza mashandiro emakambani.
Muna Gumiguru 2018, Cyprus Airways yakave nhengo yeInternational Air Transport Association (IATA). Chinangwa chenguva refu chekambani ndechekupa mukuwedzera kwekushanya kuCyprus, uye kuzvipira kwekuwedzera mukana wevatambi vemo.